Shaabad Amethyst ah oo dhif ah oo lagu xardhay geedka Luubaanka ayaa laga helay Qudus (Jerusalem) - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Shaabad Amethyst ah oo dhif ah oo lagu xardhay geedka Luubaanka ...
Shaabad Amethyst ah oo dhif ah oo lagu xardhay geedka Luubaanka ayaa laga helay Qudus (Jerusalem)
baadhayaasha oo kala shubaya ciidda intii lagu guda jiray qodista qadiimiga ah ee Beerta Emek Tzurim ee Qudus ayaa helay shaabad amethyst ah oo naadir ah oo 2,000-sano jir ah oo lagu xardhay waxa la rumeysan yahay inay tahay sawirkii ugu horreeyey ee geed loo adeegsaday luubaanka Macbadka Labaad.
Magaalada Daa’uud, Maamulka Israel iyo Maamulka Dabeecadda iyo Jardiinooyinka magaalada ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay helitaankan walaxdan dhifta & naadirka ahKhamiista maanta.
Geedku waxaa u baxay magacyo kala duwan, oo ay ku jiraan persimmon-ka kitaabiga ah, bosem ama balsam, ama Balm of Gilead.
“Tani waa helitaan muhiim ah maxaa yeelay waxay noqon kartaa markii ugu horreysay oo shaabbad laga helo adduunka oo dhan iyadoo lagu xardhay geedka qaaliga ah ee caanka ah, kaas oo ilaa hadda aan ka akhrisan karno oo keliya sharraxaadda taariikhiga ah,” ayuu yiri cilmi-baadhe Eli Shukron, kuwaas oo sameeyay qodista iyaga oo ka wakiil ah Maamulka Qadiimiga Israel iyo Magaalada Daa’uud.
Sida laga soo xigtay Maamulka Qadiimiga Israel, geedka ayaa ah mid aan xidhiidh la lahayn miraha casriga ah waxaana loo isticmaalay xilligii Macbadka Labaad sidii qayb ka mid ah si loo soo saaro fooxa macbudka, barafuun iyo daawooyin kale.
Boqoradda Masar Cleopatra waxay u isticmaashay Baambe-gileed cadar, culimadu sida ay leeyihiin.
Khubarada qaarkood waxay kaloo rumaysan yihiin in Boqoraddii Sheba ay geedka siisay Boqor Sulaymaan, sida ku qoran Kitaabka Boqorrada ee afka Kitaabka Cibraaniga (I Kings 10:10).
Previous article15 basaas oo ka tirsan Mossad ayaa lagu xidhay Turkiga
Next articleDhalinyarada u ooman xoriyadu waxay hurinayaan isku dhacyada Saxaraha Galbeed